Ciidamada Dowladda iyo Amisom Oo Weerar ismiidaamin ah oo lagu qaaday – STAR FM SOMALIA
Ciidamada Dowladda iyo Amisom Oo Weerar ismiidaamin ah oo lagu qaaday
Weerar ismiidaamin ah, ayaa waxaa duhurnimadii maanta lagu qaaday kolonyo ay la socdeen Ciidanka Militariga Somaliya & Xoogaga Nabad Ilaalinta Midowga Afrika, xilli ay marayen afaafka hore ee Deegaanka Buq Aqable Ee Gobolka Hiiraan.
Weerarkan oo loo adeegsaday gaari laga soo buuxiyay walxaha qarxa, ayaa waxaa la soo sheegayaa in Ciidamada Huwanta lagu qaaday, mar ay doonayen in wado qardo jeex ah ka galaan Buq Aqable, oo qiyaastii 90km dhinaca galbeed kaga toosan Magaalada Baladweyne.
Waxaa adag in faah faahin sax ah laga helo waxyeelada Ciidamada Huwanta ka soo gaartay weerarkaasi. Weerarku wuxuu u muuqday mid Ciidamada looga joojinaayay inay la wareegan Deegaankaasi, inkastoo aynaan taasi hakin Ciidamada. Waxaana la ogyahay illaa iyo hadda dhimashada ninkii gaariga la socday.
Nabadoon Rooble Qaasim Cismaan oo ka mid ah Odayaasha Dhaqanka Deegaanka oo la socday Ciidanka Huwanta, ayaa wuxuu sheegay inaanay jirin waxyeelo Ciidamada ka soo gaartay weerarka ismiidaaminta, sida uu yiri.
Nabadoonka oo u waramay Laanta afka Somaliga ee VOA, ayaa cadeeyay in Ciidanka Xooga Dalka & Amisom, ay si buuxdo gacanta ugu dhigeen Buq Aqable, oo sida uu sheegay muhiim u ahayd Ururka Al Shabaab.
Xoogaga Al Shabaab, ayaa aroornimadii hore ee saakay isaga baxay Deegaankaasi, ka dib markii ay ka war helayn in ciidan cudud xoogan leh, uu ku soo wajahan yahay.
Ciidamada Dowladda iyo kuwa Midowga Afrika, ayaa waxaa la soo sheegayaa in galabta ay hawlgal ka wadaan Buq Aqable. Hawlgalku wuxuu u muuqdaa mid lagu xaqiijinaayo ammaanka.
Taliska Amisom oo sheegay in 98 ka mid ah Xoogaga Shabaab ay ku dileen Gobolka Hiiraan